Aqriso Xukunka Caddaalad Darrada ee Maxkamada Wardheer Gaadhay
Gobalka doollo Sun 28-05-2017 04:04:51
(Wardheer): Wararka ku soo dhacaya xafiiska warqabadka ee Danood.Com, ayaa sheegaya in dhawaan khilaaf gacan ka hadal ah dhex maray laba nin oo ilmaadeer ah oo isku haystay guri khilaaf weyni ka taagan yahay gudaha magaalada Wardheer.
Mid ka mid ah labada nin oo ah wiil dhilinyaro ah ayaa dhaawac fudud gaadhsiiyey ninka kale wiil kale oo ay ilmaadeer yihiin. Arintan ayaa waxaa hab-dhaqan iyo tolnimo u xaliyey odayaasha Beesha Abraahiin ee magaalada Wardheer, balse maxkamada ayaa ku talaabsatay arin dadkii oo dhan ka fajacisay.
Maxkamada ayaa ku baaqday in labada nin yimaadaan maxkamada si dacwadooda loo dhagaysto. Isaga oo baaqa maxkamadda ka jawaabaya, waxaa goobtii maxkamadda iska soo xaadiriyey ninkii dhibka geystay, balse dhibanihii dhaawaca fudud gaadhay isagu ma iman maxkamada.
Meeshii la sugaayey in dhagaysiga dacwada dib loo dhigo, ayaa maxkamaddii waxa ay xukun ah XABSI 14 SANO ah ku xukuntay wiilkii dhalinyarada ahaa ee isagu gacanta geystay.
Wax-garadka Beesha Abraahiin meel kasta oo ay joogaan waxay BAAQ u dirayaan Dowlada Deegaanka Soomaalida Itoobiya, gaar Maxkamadda Sare ee Jigjiga in ay arintan si dhaqso leh u soo faragaliso, si looga hortago dhibaato kale oo dhalan karta CADDAALAD DARRADA ay ku kacday Maxkamadda magaalada Wardheer.
Ma aha markii ugu horeysay ee Maxkamadda Wardheer ay riddo xukun caddaalad darro ah. Dhawaan ayey ahayd markii ay guri uu lahaa Nabadoon Aadan Taani ay si xaq darro ah ugu xukuntay qoys kale oo iyagu aan lahayn. Xogta aan helayno ayaa ku qotonta in gurigan uu dhab ahaan u lahaa Nabadoon Aadan Taani.
Wixii ka soo kordha arintan, fadlan kala soco warsidaha Danood.Com